भिषण पहिरोले घर बगाउँदा पाहुना गएका सहित १२ जना बेपत्ता, एक जनाको ला`श देखियो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/भिषण पहिरोले घर बगाउँदा पाहुना गएका सहित १२ जना बेपत्ता, एक जनाको ला`श देखियो !!
काठमाडौं । लगातारको वर्षा पछि आएको पहिरोमा परेर जाज`रकोटमा १२ जना हराएका छन् । यहाँको बारेकोट गाउँ`पालिका ४ सार्की`गाउँमा गएराति आएको पहिरोमा परि १२ जना बेपत्ता भएका हुन् । पहिरोले सा`र्कीगाउँका २ घर बगाउँदा पाहुना बस्न आएका ४ सहित १२ बेपत्ता भएको जानकारी दिइएको छ ।
पहिरोमा परेर बेपत्ता हुनेहरुमा ५२ वर्षीय घरमुली गोपाल सार्की, उनकी पत्नि ५० वर्षीया पुष्षा सार्की, १३ वर्षीया छोरी लक्ष्मी सार्की र ११ वर्षीय छोरा अर्जुन सार्की छन् ।
पहिरोमा परेका मध्ये १ जनाको लाश देखिएको तर पहिरो बाट निकाल्न नस`किएको जाज`रकोटका प्रहरीले जानकारी दिएको छ । ला`शको स`नाखत हुन सकेको छैन । प्रहरी घटनास्थल पुगेर बेप`त्ताको खोजी गर्दैछ । प्रहरी चौकी सिलिङ्गचौरको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको जनाइएको छ ।
अर्को तर्फ इ`लाका प्रहरी कार्या`लय बारेकोट र प्रहरी चौकी लिम्सा बाट पनि प्रहरीटोली घट`ना स्थलतर्फ गएको जानकारी दिइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाट प्रहरी निरीक्षक हेरम्ब पाण्डेको नेतृत्व`मा प्रहरी टोली घ`टना स्थल तर्फ हिँडेको छ । घ`टना स्थल आसपा`समा फोन नलाग्ने र प्रहरी सञ्चार सेटले काम नगर्ने हुँदा घटनाबारे विस्तृत जान`कारी लिन कठिनाई भएको उल्लेख गरि`एको छ ।